Ny Rariny Ho an’ireo ’Tetikasa Rehetra Mikendry Ny Fanovana Ara-pitsarana Sy Ny Fitsaharan’ny Kolikoly Lehibe Ao Bolgaria · Global Voices teny Malagasy
Ny Rariny Ho an'ireo ’Tetikasa Rehetra Mikendry Ny Fanovana Ara-pitsarana Sy Ny Fitsaharan'ny Kolikoly Lehibe Ao Bolgaria
Voadika ny 21 Jona 2017 7:46 GMT
Mpanao fihetsiketsehana ao Sofia, Bolgaria milanja sora-baventy tamin'ny 23 May 2017 sgtmivaky hoe ‘Ny rariny ho an'ny Fisantarana Andraikitra’ ary ahitana ny sarin'ilay mpampanoa lalàna anti-mafia Italiana maty nisy namono, Giovanni Falcone . Sary avy amin'i Konstantin Pavlov, nahazoana alalana.
Hetsi-panoherana maro no natao manerana an'i Bolgaria tamin'ny 23 May sy ny 30 May mba handrisika ny fanavaozana ao amin'ny fitsarana. Notarihin'ny ‘Rariny ho an'ny Fisantarana Andraikitra Rehetra‘, anisan'ny hetsika midadasiky ny olom-pirenena mitaky ny fampiharana ny fitsipika demaokratika napetraky ny Vondrona Eoropeana (EU) ny hetsi-panoherana.
Ao Eoropa Afovoany sy Atsinanana, ny teny hoe “Eoropeana” dia tsy manondro fotsiny ny toerana ara-jeografika, fa midika hevitra hafa ara-politika matanjaka mifandraika amin'ny fanatrarana ny ambaratonga demaokratika sy ny fampandrosoana ara-toekarena ao amin'ireo mpikambana voalohany ao amin'ny Vondrona Eoropeana ihany koa. Efa nanao dingana lehibe tamin'ity tari-dalana ity ny Bolgaria Komonista taloha ary lasa mpikambana ao amin'ny Vondrona Eoropeana tamin'ny taona 2007, na dia maro aza no mihevitra fa mbola mila mampihatra fanavaozana ara-politika bebe kokoa izy.
Tamin'ny 23 May, efa ho olona 2000 no nitangorona tao afovoan-tanànan'i Sofia, renivohitr'i Bolgaria, mitaky fanavaozana ara-pitsarana. Niara-nanao diabe niaraka tamin'ny teny faneva ‘Diabe ho amin'ny Rariny Eoropeana’ sy ‘Fihetsiketsehana Hanafahana ny Firenena amin'ny Mafia’ izy ireo. Notohanan'ireo fikambanana fiarahamonina sivily maromaro, manam-pahaizana malaza, mpisolovava ary hatramin'ny mpitsara sasany mihitsy aza ny fihetsiketsehana.
Nahitàna fihetsiketsehana ihany koa tao tanànan'i Plovdiv sy Varna.
Tsy nosafidiana kisendrasendra fotsiny ny andron'ny fihetsiketsehana. Tamin'izany andro izany, tamin'ny taona 1992, maty nisy namono tamin'ny baomba napoaka tamin'ny fiara ilay mpampanoa lalàna Italiana Giovanni Falcone, izay sahy namely ny Mafia Sisilianina.
Naseho teo amin'ny farany ambony amin'ny afisy ny teny faneva: “Tsy Hangina Izahay!” sy ny “Diabe ho amin'ny Rariny Eoropeana”. Sary avy amin'i “Rariny ho an'ny Fisantarana Andraikitra rehetra” (Justice for All Initiative.)
Manasokajy ny tetikadin'ny governemanta miady amin'ny kolikoly ho tsy mahomby ny tatitra farany momba ny rafitra fiarahamiasa sy fanamarinana ao Bolgaria avy amin'ny Vaomiera Eoropeana (EC):
Dingana lehibe ny fampandrosoana nataon'ny fitondram-panjakana tamin'ny tetikadi-pirenena nohavaozina ho amin'ny ady atao amin'ny kolikoly, saingy mbola misy ny fanamby mba hiantohana ny fampiharana izany, hampihatra rafitra ara-dalàna sy hametraka ny andrim-panjakana kasaina atsangana.
Nilaza ireo olana ara-kolikoly sy ny tsy fisian'ny fitokisana ny rafi-pitsarana izay manakana ny fampiasam-bola ihany koa ny tatitra. Manoro hevitra ny Vaomiera Eoropeana amin'ny fampiharana lalàna vaovao momba ny ady amin'ny kolikoly sy ny famoronana sampana miady amin'ny kolikoly mba hamaha ny tahan'ny kolikoly avo lenta sy ny ady tombontsoa.
Nandiso fanantenana olona maro ny fanendrena ny filohan'ny Antenimieram-pirenena Tsetska Tsacheva ho Minisitry ny Fitsarana satria mihevitra ireo olona fa tsy mahavita mampihatra ny fanavaozana izy noho izy akaiky loatra ny antokon'ny fitondrana.
Nandritra ny fampielezan-kevitra fifidianana filoham-pirenena taona 2016, nampanantena hametra-pialàna ny Praiminisitra Borisov raha tsy lany amin'ny fifidianana ny kandidàn'ny antokony, Tsetska Tsacheva. Tamin'ny 6 Novambra 2016, laharana faharoa tamin'ny fihodinana voalohany i Tsacheva, resin'ilay Jeneraly Major Rumen Radev tohanan'ny Antoko Sosialista, 22 isanjato ny vato azony tamin'ny fifidianana raha 25,4 isanjato ny an'i Radev. Nametra-pialana tamin'ny toerana nisy azy i Borisov avy eo.
Tamin'ny Martsa 2017 teo, nisy ny fifidianana parlemantera natao tany Bolgaria tao anatin'ny krizy ara-politika izay niafara tamin'ny fiaraha-mitantana teo amin'ny antoko afovoany-ankavanana an'i Borisov, Olom-pirenena ho amin'ny Fampandrosoana Eoropeana ao Bolgaria na ny GERB, sy ny vondrona nasionalista, ny Manda Tia Tanindrazana (Patriotic Front). Lasa praiminisitra indray i Borisov noho ny fiaraha-mitantana. Saingy niteraka tantara ratsy izany satria niparitaka be hatry ny taloha ny sarin'ireo mpikambana sasany ao amin'ny Manda Tia Tanindrazana manao fiarahabana Nazi.
Tamin'ny 30 May, niverina teny an-dalambe ny “Rariny ho an'ny Fisantarana Andraikitra Rehetra ” tamin'ny alalan'ny fikarakarana fiihetsiketsehana “fisotroana kafe” teo anoloan'ny biraon'ny filoha izay lalana fidiran'ireo mpitarika antoko politika sy manampahefam-panjakana ambony hanatrika ny fivorian'ny Vaomiera Fakàn-kevitra Momba ny Fiarovam-pirenena. Nandrisika ny Filoha Radev, izay raisin'ny maro ho mariky ny firaisan-tsaina ao amin'ny firenena izy ireo mba hanohana ny fitakian'izy ireo hisian'ny fanavaozana ara-pitsarana.
Sioka: Mangataka ny “Rariny ho an'ny Rehetra” mba handray fepetra hisian'ny fanavaozana ara-pitsarana ny filoha.
Sary: Manofahofa tanana amin'ny olom-pirenena ny Praiminisitra Borisov raha hiditra ny biraon'ny filoha.
Tsy noraharahian'ireo fampahalalam-baovao mahazatra isan-karazany ny fihetsiketsehana. Niampanga an'ireo mpanao fihetsiketsehana ho tsy tia tanindrazana mihitsy aza ny tranonkalam-baovao antserasera iray satria mpandray anjara iray no hita mitazona sora-baventy mandiso tsipelina ny Bolgaria, ka nanome tsiny azy ireo ho “manararaotra ny zanak'izy ireo”, milaza fa nanimba ny Andron'ny Ankizy ny fihetsiketsehana 30 May, andron'ny ankizy izay raha ny marina dia ankalazaina ny 1 Jiona ao Bolgaria.